ချိန်းရှယ်ယာယခုအွန်လိုင်း Microsoft Corporation ဒီနေ့ MSFT ၏ရှယ်ယာစျေးနှုန်း, စတော့ရှယ်ယာစျေးနှုန်းများ Microsoft Corporation ။
MSFT = 261.50 အမေရိကန်တဒေါ်လာ
+0.38 USD (+0.15%)
Microsoft Corporation ၏ကူးပြောင်းခြင်းသတင်းအချက်အလက်ကို အမေရိကန်တဒေါ်လာ တစ်နေ့မှာတစ်ကြိမ်အသစ်ပြောင်းသည်။ Microsoft Corporation ၏နောက်ဆုံးစာချုပ်ရှယ်ယာစျေးနှုန်းကို အမေရိကန်တဒေါ်လာ ပြသထားတယ်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသောဒေတာဘေ့စ်များမှ Microsoft Corporation မှ အမေရိကန်တဒေါ်လာ မှစတော့စျေးနှုန်း။ Microsoft Corporation ၏ ၁ စတော့ 0.38 အမေရိကန်တဒေါ်လာ ဖြင့်မြင့်တက်ခဲ့သည်။ Microsoft Corporation မနေ့ကကတည်းကမြင့်တက်ခဲ့သည်။ 1 စတော့ရှယ်ယာများ၏ကုန်ကျစရိတ် Microsoft Corporation သည်ယခုညီမျှသည် 261.50 ၏စတော့ရှယ်ယာ အမေရိကန်တဒေါ်လာ
Microsoft Corporation ကုမ္ပဏီအတွက်ရှယ်ယာတန်ဖိုး အမေရိကန်တဒေါ်လာ
လွန်ခဲ့သောခြောက်လက Microsoft Corporation ကို 339.51 အမေရိကန်တဒေါ်လာ သို့လဲလှယ်နိုင်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်က Microsoft Corporation ကိုလဲလှယ်နိုင်သည် 245.17 ၏စတော့ရှယ်ယာ အမေရိကန်တဒေါ်လာ လွန်ခဲ့သောသုံးနှစ်က Microsoft Corporation ကို 128.07 အမေရိကန်တဒေါ်လာ အတွက်ဝယ်ယူနိုင်တယ်။ စတော့စျေးနှုန်းဇယားကိုစာမျက်နှာပေါ်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ -2.97% တစ်ပတ်လျှင် - Microsoft Corporation ၏စတော့စျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲ Microsoft Corporation ၏ အမေရိကန်တဒေါ်လာ ၏စတော့စျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲသည် 6.66% ဖြစ်ပါသည်။
စတော့ရှယ်ယာကိုးကား Microsoft Corporation အမေရိကန်တဒေါ်လာ
MSFT သို့ အမေရိကန်တဒေါ်လာ (USD)
1 MSFT 261.50 အမေရိကန်တဒေါ်လာ
5 MSFT 1 307.50 အမေရိကန်တဒေါ်လာ
10 MSFT2615 အမေရိကန်တဒေါ်လာ
25 MSFT6537.50 အမေရိကန်တဒေါ်လာ
50 MSFT 13 075 အမေရိကန်တဒေါ်လာ
100 MSFT 26 150 အမေရိကန်တဒေါ်လာ
250 MSFT 65 375 အမေရိကန်တဒေါ်လာ
500 MSFT 130 750 အမေရိကန်တဒေါ်လာ
ယနေ့2615 အမေရိကန်တဒေါ်လာ 10 Sberbank ၏ 10 စတော့ရှယ်ယာတွေအတွက်ရောင်းနိုင်ပါတယ်။ / SPAN> ။ မင်းလဲလှယ်နိုင်တယ် 25 ၏စတော့ရှယ်ယာ များအတွက် Microsoft Corporation အတွက်6537.50 အမေရိကန်တဒေါ်လာ မင်းရှိရင် 13 075 အမေရိကန်တဒေါ်လာ, အဲဒီနောက် ဗြိတိသျှဗာဂျင်းကျွန်းစုဗြိတိသျှအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာနယ်မြေတွေကို သူတို့ရောင်းလို့ရပါတယ် 50 ၏စတော့ရှယ်ယာ Microsoft Corporation ။ မင်းရှိရင် 26 150 အမေရိကန်တဒေါ်လာ, အဲဒီနောက် ဗြိတိသျှဗာဂျင်းကျွန်းစုဗြိတိသျှအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာနယ်မြေတွေကို သူတို့ရောင်းလို့ရပါတယ် 100 ၏စတော့ရှယ်ယာ Microsoft Corporation ။ သင်ရောင်းနိုင်ပါတယ် 65 375 အမေရိကန်တဒေါ်လာ အတွက် 250 ၏စတော့ရှယ်ယာ Microsoft Corporation ။ ဒီနေ့ 500 ၏စတော့ရှယ်ယာ Microsoft Corporation အတွက် ၀ ယ်နိုင်သည် 130 750 အမေရိကန်တဒေါ်လာ
စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ MSFT သမိုင်း
11/05/2022 260.55 USD -8.95 ↓
10/05/2022 269.5 USD -
ဒီနေ့ 500 ၏စတော့ရှယ်ယာ MSFT = 261.5 USD ။ Microsoft Corporation အမေရိကန်တဒေါ်လာ 05/20/2019 တွင် အမေရိကန်တဒေါ်လာ - 05/20/2019 261.12 SPAN> အမေရိကန်တဒေါ်လာ ။ 12 မေ 2022 Microsoft Corporation ၁ ခု၏စတော့ရှယ်ယာ 255.35 အမေရိကန်တဒေါ်လာ လွန်ခဲ့သောလအတွက် MSFT / USD ၏အများဆုံးစတော့စျေးနှုန်းသည် 10/05/2022 တွင်ရှိခဲ့သည်။ 10 မေ 2022 Microsoft Corporation ၁ ခု၏စတော့ရှယ်ယာ 269.5 အမေရိကန်တဒေါ်လာ
Microsoft Corporation ၏တစျခုမှာဝေစုကိုယနေ့ 261.50 $. ဝေမျှမယ်စျေးနှုန်း MSFT ယခင်ကုန်သွယ် နေ့မှစ. +0.15% သို့မဟုတ် +0.38 USD သို့ပြောင်းလဲဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျ 26 150 အမေရိကန်တဒေါ်လာ အတွက် Microsoft Corporation 100 ရှယ်ယာဝယ်ခြင်း, သို့မဟုတ် 13 075 အမေရိကန်တဒေါ်လာ အတွက် MSFT ၏ 50 ရှယ်ယာများကိုရောင်းချနိုင်ပါတယ်။
မိုက်ကရိုဆော့ဖ Corp ကနည်းပညာကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာလိုင်စင်ဖွံ့ဖြိုး, နှင့်ဆော့ဖ်ဝဲထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးကိုထောကျပံ့။ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားနှင့် Business လုပ်ငန်းစဉ်, Intelligent တိမ်တိုက်နှင့်ပိုမိုကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာ: ၎င်း၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးအစိတ်အပိုင်းများသို့ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်သည်။